NLD ပြန်ကြားရေး မြန်ဆန်ရန် သတင်းနည်းပညာ သုံးမည် | Ko Oo + Ma Thandar
« စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းရေး အဆိုပြုလွှာ ဦးသိန်းညွန့် တင်သွင်းမည်
စစ်တိုင်းဌာနချုပ် အသစ်တိုးချဲ့ »
NLD ပြန်ကြားရေး မြန်ဆန်ရန် သတင်းနည်းပညာ သုံးမည်
မင်းနိုင်သူ	Wednesday, 29 December 2010 18:53 – ဧရာဝတီ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)၏ ပြန်ကြားရေး လုပ်ငန်းများ သွက်လက်မြန်ဆန်ရေး ၊ လူထုနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ရေးတို့ အတွက် သတင်းနည်းပညာ အသုံးပြုသွားရန် ပါတီတွင်း ညှိနှိုင်းလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ပါတီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အများသိနိုင်အောင် အွန်လိုင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ့တွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေပါတယ်။ မကြာမီမှာ လုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ပါတီပြောခွင့်ရ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လူငယ်များ တွေ့ဆုံပွဲကို ကူညီပေးခဲ့သူ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းက“NLDဟာ သမားရိုးကျလမ်းကြောင်းကြီးကိုပဲ သွားနေတယ်။ ခေတ်နဲ့ အညီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ သိပ်မလုပ်နိုင် ဘူး။ အင်တာနက်တင်မကဘူးဗျာ။မနေ့က ကျနော်တို့ လူငယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ တွေ့ရတာက ရုံးလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်
ကွန်ပျူတာ ပြည့်ပြည်၀၀ မသုံးနိုင်သေးဘူး။ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ အစိုးရ ရုံးအိုကြီး တရုံးနဲ့ တူနေတယ်”ဟု ပြောသည်။
NLD ပါတီအနေဖြင့် ပါတီလူငယ်များ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ယုံယုံကြည်ကြည်နှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟုလည်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်ကြားသလောက်ကတော့ ပါတီကလူကြီးတွေကလည်း တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ချမှတ်ထားတယ်။ လုပ်ခဲ့ရင် ပါတီက ထုတ်ပစ်တာတွေ ၊ ဘာတွေရှိတော့ လူငယ်တွေကလည်း ကျော်မလုပ်ရဲကြဘူး ။ ရုံးတွင်းအောင်းတဲ့ အလေ့အထတွေ ဖြစ်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒါတွေ ပြင်သွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ပြင်လည်း ပြင်သင့်နေပါပြီ”ဟု ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းက သုံးသပ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီ ၃၇ ခုအနက် အရပ်သားပါတီ အများစုသည် ပါတီဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ပါတီခေါင်းဆောင်များ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၊ ပါတီရပ်တည်ချက်များကို အင်တာနက်အသုံးပြုကာ ပြည်သူလူထုသိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်လာကြသော်လည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ပါတီမှာမူ ယခုအချိန်ထိ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်ပိုင် ၀ဘ်ဆိုက်ထောင်ထားသည့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ) ဥက္ကဌ ဦးသုဝေက “ကျနော်တို့ လူကြီးတွေကတော့ အင်တာ နက်နည်းပညာနဲ့ အကျွမ်းမ၀င်ဘူး။ သို့သော်လည်း ပါတီက လူငယ်တွေက သူတို့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့က လည်း လုပ်ပေါ့။ ဘာတွေလုပ်ကြမယ် ၊ ဘာတွေ တင်ပြကြမယ်ဆိုတာကိုတော့ လူငယ်တွေက ကျနော်တို့နဲ့ ညှိနှိုင်းပါတယ်။ ဒီအတွက် လည်း ပါတီဝင်ထုအပြင် အခြားသော လူငယ်တွေကအစ ပါတီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိလာကြ တာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံရှိ ဦးကျော်မြင့်နှင့်ပူးပေါင်းကာ ဦးသုဝေပါတီထူထောင်မည်ဆိုသော အင်တာနက် သတင်းကြောင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မထူထောင်မီကပင် ပါတီကို လူစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့သည်ဟုလည်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တဦးက ဆိုသည်။
“၀ဘ်ဆိုက်အတွက် လိုအပ်တာတွေ တင်တာ ချတာကို အများသုံးအင်တာနက်ဆိုင်တွေကပဲ လုပ်တာပါ။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားပြီး သုံးစွဲဖို့ဆိုတာကလည်း ငွေရေး ကြေးရေးအရ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလေ”ဟု အဆိုပါ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဝင်က ပြောသည်။
NLD အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာပြီးနောက် သူမအနေဖြင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် လူထုနှင့်ထိတွေ့လိုကြောင်း ၊ ဒုတိယပင်လုံညီလာခံကိုလည်း တယ်လီ ကွန်ဖရင့် ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းလည်း ရှိနိုင်ကြောင်း ၊ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရေး တရားဝင် လျှောက်ထားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နယ်လှည့်ခရီးစဉ်အတွင်း၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းအပြီး NLD ပါတီ နယ်ရုံးခွဲများကို စစ်အစိုးရက ပိတ်ပစ်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်ရှိ NLD ရုံးချုပ်ဖုန်းကိုလည်း ယခုအချိန်အထိ ဖြတ်တောက်ထား သည်။
“ကျနော်သိသလောက်တော့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပါတီတွေအားလုံး အများသုံးအင်တာနက်ဆိုင်တွေကပဲ အသုံးပြုနေတာပါ။ ပါတီဝင် လူငယ်တွေကပဲ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေကို ဖွဲ့စည်းပေးနေကြတာပါ ၊ NLD အနေနဲ့လည်း ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့သင့်ပါပြီ။ လုပ်မှသာ လည်း ပါတီလုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပိုပြီး ထိရောက်လာမှာပါ ၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံးက ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ ထိုင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မလွယ် ပါဘူး”ဟု ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းက သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
၂၀၁၀ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၀ ပါတီကို တရားဝင် ရပ်တည်ခွင့် မရှိတော့ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် စစ်အစိုးရပိုင် မီဒီယာများမှတဆင့် ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် NLD ပါတီသည် အခမ်းအနားများကိုလည်း ဒုဥက္ကဌ ဦးတင်ဦးနေအိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပခဲ့သည်။
“မလိုအပ်ဘဲ ထိပ်တိုက်တွေ့မှုကို မပြုလုပ်ချင်တဲ့အတွက် ပါတီရုံးချုပ်မှာ အခမ်းအနားလုပ်တာတွေကို ခဏရပ်ထားခဲ့တယ်။ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာပြီးနောက် ဥပဒေအရ တရားဝင်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ထားပြီးချိန်ကစ ပြီး ပါတီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အကုန်ပြန်လုပ်နေပါပြီ”ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
NLD ပါတီ ပြန်ကြားရေးကော်မတီကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဦးခင်မောင်ဆွေက ဦးဆောင်ခဲ့ သည်။
ထို့နောက် ဦးခင်မောင်ဆွေ ဦးဆောင်သော NLD အဖွဲ့ဝင်တချို့သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အင်အားစုအဖြစ် ပါတီ ထူထောင် ကာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာ ယခုအခါ NLD ပါတီ ပြန်ကြားရေးကော်မတီတွင် ဦးဉာဏ်ဝင်း ၊ ဦးအုန်းကြိုင် ၊ ဦးကြည်တိုးနှင့် လူငယ် တချို့ တာဝန်ယူထားကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted on December 29, 2010 at 2:07 pm and is filed under အဖွဲ့ချုပ် နှင့် ပြည်တွင်း အတိုက်အခံများ, ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.